Waxay ahayd 1-dii bishii Ogos ee sannadkii 2019-kii markii Villa Somaliya ay baahisay xogta ah in Madaxweyne Farmaajo uu iska celiyey dhalashadii uu ka haystay dalka Maraykanka, iyaga oo sheegay in si iskii ah uu u go'aansaday.
Ka dib markii soomaaliya ay ka bilowdeen dagaalladii sokeeye, wuxuu go'aansaday inuu sii joogo. Sida ay qortay New York Times, nin ay saaxiibo yihiin oo sida oo kalena qaraabo ay yihiin Farmaajo wuxuu sheegay in uu markii hore magangalyo siyaasadeed ka dalbaday Canada, halkaas oo ay ku noolaayeen hooyadiis iyo walaalihiis, markii dambena uu helay baasaboor Canada.
Cabdirashiid Xaashi oo madax ka ah xafiiska warfaafinta Villa Somaliya wuxuu yiri: "Waan akhriyey waxa wargeyska uu qoray. Run ahaantii warar aan sal iyo raad lahayn ayaa ku jira."
"Madaxweynahu waxa uu haystaa baasaboorka Soomaaliya, hore na wuxuu u haystay ka Maraykanka, waana kii iska dhiibey madaxweynuhu, si uu shaqadan uu u dhaartay ee madaxtinnimo ee dalka uu si hufan ugu guto. Ma jirto markaa dal kale oo dhalashadiisa uu haysto oo aan ka ahayn Soomaaliya".